Drinksdị ihe ọ Greekụ Greekụ Greek, ị maara ha niile? | Njem zuru oke
Ahụkarị Greek ọ drinksụ drinksụ
Berkwụ Alberto | | Greece
Mgbe anyị chere echiche banyere obodo Mediterenian nke ezigbo nri na mmanya ọkụ, Greece bụ otu n'ime ndị mbụ batara n'uche.
Omenala nke jikọtara ala na nri Mediterranean na-adabaghị adaba, mba Gris karịrị yogọt ya, musaka na gyros (ma ọ bụ ụdị nke kebap mythical) mgbe a bịara inye anyị ihe ịtụnanya dị ka ndị a. ụdị mmanya ndị Grik ezigbo maka oge ọ bụla, oriri ma ọ bụ mgbede ịhụnanya n'etiti osimiri na ogidi.
El ouzo bụ nri na-egbu egbu egbu sitere na staple werekwa uto nke anise. Ọ bụ ihe ọ alcoụholicụ na-egbu egbu na-egbu egbu na Gris, na-ejikarị obere iko na-esochi mmiri ice ọzọ iji kwụọ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ogo 50 nke ụdị ụfọdụ nwere ike iru.
Ugboro ha na-efe ya na efere nwere oliv na chiiz, ọ bụ ezie na m na-ejikarị ya eme ihe mgbe m risịrị nri Grik, dị ka oke ma ọ bụ anise n'onwe ya. N'oge ụfọdụ enwere m ịnwale ya ya na mmanya champeenu na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke ọma ...
Versiondị nwa nke Ouzo bụ ihe dị ka nzaghachi nke ndi Grik na mojito. Ihe ọ summerụ cockụ mmanya na-enye ume ọhụrụ n'oge okpomọkụ nke ouzo, sugar, lemon, mint na soda, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-a withụ ya na Coca Cola.
Ezigbo ihe ọ drinkụ drinkụ maka nri abalị mgbe ị risịrị nri obi ma ọ bụ n'oge ọkọchị n'abalị n'ụsọ osimiri dị na Mykonos. Dị nnọọ ume ọhụrụ.
Na metaxa bụ ụdị nke Cognac Greek nke mejupụtara brandi, ngwa nri na mmanya muscat, ọ bụ ezie na ọtụtụ na-eme ya n'ejighị ihe ikpeazụ a iji nye ya ekpomeekpo. A na-etinyekwa aromas nke laurel Roses na cinnamon, nke na-agbakwunye mmetụ pụrụ iche na ngwakọta; Ntụziaka nke naanị mmadụ ole na ole maara na ọ naghị adị mfe mgbe niile.
Metaxá bụ mmanya buuru ihe kariri mba iri isii nke nke ozo kewara uzo ise di iche na-adabere na ntozu nke ogige.
La retsina bu mmanya di ocha (mgbe ụfọdụ site na ụdị rosé) nke na-adị ka resin pine. A kwenyere na Retsina bụ otu n'ime mmanya kacha ochie na Gris, kemgbe ihe karịrị afọ 2. N'ezie, a malitere imepụta ya na enyo enyo nke na-eme ka ikuku nwee ike ịbịakwute mmanya, nke mebiri ya.
N'ụzọ dị otú a, ha malitere itinye resin n'ime arịa ndị ahụ, na-enye mmanya ahụ ihe na-esi ísì ụtọ dị iche iche ma kwe ka ọ dịrị n'ọnọdụ ka mma. Ndi retsina ọ na-eri oke oyi na ogwe na ulo anumanu ma a na-aru ya n'ime ite ocha uhie ma obu nke ola edo.
Na mgbakwunye na retsina, n'ala Bacchus mmanya anaghị emechu ihu, ọkachasị mgbe Gris, dịka mba ndị ọzọ dịka Spain, Italytali ma ọ bụ Lebanon nwere ụfọdụ mmanya kacha mma n'ụwa n'ihi ezigbo okpomọkụ Mediterranean.
N'etiti ọtụtụ mmanya ya, Zitsa, site na etiti Gris, ọ bụ otu n'ime ihe kacha mma akọrọ ọcha nke mba, ebe uhie nke Rapsani bu ihe ozo di nma.
Peloponnese na-enye mkpụrụ osisi na-acha uhie uhie, Nemea, nke bụ ihe na-atọ ụtọ, ebe agwaetiti Aegean nwere ndị nnọchi anya dịka mmanya ndị na-egbu maramara sitere na Rhodes ma ọ bụ mmanya dị nsọ, ezigbo ọcha na-emepụta na Santorini.
Raki bụ aha ndị Turks ji ama ihe ọ thisụ thisụ a ebe okwu Cretan bụ tsikoudia. Ọ bụ ihe ihe ọquụ withụ na-aba n'anya nke ejiri mmanya na-aba n'anya, nke kachasị mkpa nke akwụkwọ ọnụahịa ọrụ aka, ebe ọ bụ nkọwapụta ya na ọtụtụ ụlọ na ụlọ nkwakọba ihe.
Ọ dị ezigbo ike ọ bụrụ na anyị ezute onye Grik, o yikarịrị ka ha ga-emeso anyị ị aụ raki dị ka ihe nnọchianya nke ọbụbụenyi.
Na Absolut Viajes anyị agwala gị okwu ọtụtụ oge banyere kọfị Greek. A na-eji mkpụrụ ọka mara mma eme ya na obere ite ma tinye obere iko mmiri, na-agbakwunye shuga n'oge isi nri.
Mgbe anyị rịọrọ ya na cafe anyị nwere ike rịọ ya ma ọ dị ụtọ ma ọ bụ na-atọ ụtọ ha ga na-eji otu iko mmiri soro anyị mgbe niile. Dị ka ejiri ọka mee ya, ọ dị mma ịhapụ ya ka ọ zuru ike nwa oge.
Ọ bụ ezie na ndị Gris karịrị Heineken, Mythos biya bụ naanị biya biya na Greece. O sitere na mgbakwunye Carlsberg, Mythos nwere 5% mmanya ma nwee ihe ngosi nke mkpụrụ. Ọ bụghị nke ụwa, mana ndị na-abata n'ụlọ oriri na ọ Greekụ Greekụ Greek na-anwa ịmara obodo ahụ site na biya ha.
Ndị a ụdị mmanya ndị Griks na-edozi ahụ site n'okike sitere n'oké osimiri Mediterenian, ahịhịa ya na osisi vaịn nke ụlọ ọrụ ya na-ewusi ike kemgbe oge Bacchus gbadara n'ubi ya iji mee ndụ na nymphs na ụmụ agbọghọ. Ọ bụrụ na ị gaa Gris, ma ọ dịkarịa ala nwaa ouzo, ị gaghị enwe mmechuihu.
You nwarala otu n’ime ihe ndị a ihe ọ drinksụ gụ Greek?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ahụkarị Greek ọ drinksụ drinksụ
mmmmm… Amaara m ihe m ga-a drinkụ na ezumike ọzọ m ga-aga Greece !!!
Ndewo ndị enyi, a ga m arụ ọrụ bara uru maka kọleji na m ga-eweta ihe dị ka Grcia na amaghị m ebe m ga-azụta.Ọ nwere onye maara ma ọ dị ebe dị na Buenos Aires ebe ha na-ere ihe Greek?
Joan Argemi dijo
You ma ebe m nwere ike ịzụta mmanya Retsina na Barcelona?
Zaghachi Joan Argemi
Na Barcelona, ​​ị nwere ike ịchọta ngwaahịa ndị a na ALFIL GASTRONOMIA, n'okporo ámá 67 Asturies, 08012 Barcelona (Plaça del Diamant na agbata obi Gracia).
Osimiri kacha mma na Cartagena de Indias
Mpaghara nke Colombia